घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज » भेगास जाँदै हुनुहुन्छ? तपाइँको मास्क प्याक गर्नुहोस्
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • सरकारी समाचार • स्वास्थ्य समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • समाचार • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
भेगास जाँदै हुनुहुन्छ? मास्क लगाउनुहोस्!
नेभाडा काउन्टीहरु को अधिकांश राज्य मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा COVID-19 को बढ्दो नयाँ केसहरु को बिरुद्ध सुरक्षा को प्रयास मा मास्क जनादेश को अधीनमा फिर्ता छन्। १ state राज्य काउन्टीहरु मध्ये १२ मास्क मास्क लगाउन को लागी फिर्ता छन्।
सिन सिटी को लागी जाँदै हुनुहुन्छ? तपाइँ एक मास्क लगाउन को लागी जाँदै हुनुहुन्छ।
एक स्लट मिसिन वा क्रेप्स टेबल मा घण्टा को लागी क्यासिनो मा बस्ने योजना? तपाइँ एक मास्क चाहिन्छ पुरा समय तपाइँ त्यहाँ हुनुहुन्छ।
अनन्त बुफेहरु मा भाग लिन चाहानुहुन्छ? पक्का, अगाडि जानुहोस्, तर तपाइँ अझै पनी वास्तविक खाना को बीच मास्क लगाउनु पर्छ।
मास्क जनादेश फिर्ता भएकोमा पर्यटकहरुको मिश्रित भावना छ। केहि बिल्कुल परेशान छैनन्। वास्तव मा, धेरैले आफ्नो मास्क मा कुनै पनी सावधानी को बाहिर आफ्नो मास्क राख्न को लागी निर्णय गरेका छन्। तर अरु को लागी, उनीहरु पालन गर्न को लागी धेरै खुसी छैनन्। विशेष गरी धुम्रपान गर्नेहरु। मास्क तल तान्नु भएको छ, एक तान्नुहोस्, सास फेर्नुहोस् र सास फेर्नुहोस्, मास्क फिर्ता राख्नुहोस् उनीहरुलाई झन्झट भन्दा बढी को लागी।
देशभरि, यस्तो देखिन्छ कि धेरै सरकारी अधिकारीहरु पनि थकित छन्, र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई निर्णय गर्न छनौट गरीरहेका छन्। मास्क लगाउनुहोस्, मास्क नलगाउनुहोस्, यो उनीहरुमा निर्भर छ। उदाहरण को लागी हवाई लिनुहोस्। यदि उनीहरुको नयाँ केस नम्बरहरु आँकडा को "COVID-19 heyday" मा उनीहरु भन्दा पछाडि बढिरहेछन्, राज्यपालले भने कि उनी मास्क लगाउन अनिवार्य गर्न कुनै कदम चाल्दैनन्। आज, उसको मापदण्ड मात्र खोप को डाटा मा हेर्न र बथान प्रतिरक्षा प्राप्त मा आधारित छ। जाहिर छ कि अब र त्यसपछि के बीच हुन्छ - यदि "तब" कहिल्यै आउँछ - कुनै चिन्ताको विषय छैन। चिकित्साकर्मीहरु उहाँ संग छनौट गर्न को लागी एक हड्डी हुन सक्छ किनकि उनीहरुका अस्पतालहरु हरेक दिन अधिक र अधिक COVID-19 बिरामीहरु संग भरीरहेका छन्।